Software Management Patch | Ihe ndozi ngwanrọ Windows | Motadata
Software Management Patch
Chọpụta ngwa ngwa Omume
Mee ka njikwa njedebe dị mfe ma mee ka ihe omume patch gị dị ngwa site na iji Software Management Patch.
Debe sistemu na ngwa gị ka ọ dị ọhụrụ
80% Adịla na Mwakpo Saịtị enwere ike
Mechie adịghị ike sistemụ ọ bụla nke ọma site na itinye patches na-akpaghị aka.
100 + Ngwa akwadoro
Chọpụta na budata na-akpaghị aka mmelite patch kacha ọhụrụ nke ndị na-ere ahịa ndị ọzọ wepụtara.
30% Mbelata na TCO
Wedata mkpokọta ọnụ ahịa nke ekere òkè n'iji ngwọta ihe nketa.
Jikwaa Sistemu na Ngwanrọ na-enweghị mbọ
Mmelite na Nchịkwa njikwa
Ngwa na ngwa gị na-enwe ike mgbe niile na mwakpo cyber. Motadata ServiceOps Patch Manager na-enyere gị aka idowe sistemu na ngwanrọ gị niile ma na-arụ ọrụ nke ọma, si otú a na-ebelata ihe egwu nchekwa.
Jikwaa ebe njedebe n'enweghị nsogbu ma bulie arụmọrụ arụmọrụ site na ịmegharị usoro njikwa patch dum.
Nyochaa ihe njedebe na-akpaghị aka
Budata na akpaghị aka ma tinye patịkị dabere n'ụkpụrụ ụfọdụ
Jikwaa ngwụcha ngwụcha
Mmụba na-aba ụba
Nrube isi nke patch zuru oke
Chọpụta adịghị ike tupu ikesa patches iji gbochie nsogbu arụmọrụ na gburugburu ebe na-arụ ọrụ wee nweta nnabata 100% patch.
Nyochaa ngwụcha ngwụcha niile
Nnwale kwachie akpaaka
Usoro nnabata akpaaka
Jụlata patches na-ekwesịghị ekwesị
Ogologo oge sistemụ
E belatara ihe ize ndụ
Akụrụngwa IT gị
Nweta visibiliti n'ime nrube isi na patch na ọkwa yana nchekwa netwọkụ niile site n'ịmepụta akụkọ zuru oke n'ime igbe.
Akụkọ patches na-efu efu
Akuko patches ewepụrụ
Akụkọ nchọpụta ahụike sistemu
Na Akụrụngwa IT Site na 30%
Patch Manager atụmatụ
Wetuo ihe egwu nchekwa, na-agbaso ụkpụrụ nnabata, wee nweta ọ dị mfe ijikwa Motadata Patch Manager.
Nwelite Patch Rollback
Mweghachi ma ọ bụ wepu patches ma ọ bụ patches na-abaghị uru na ngwa emechiela ajụla.
Nchọpụta Ahụike Sistem
Chọpụta patches ndị na-efu ma chịkọta ha dabere na ịdị njọ site na iji nchọpụta ahụike Sistemụ nyochaa njedebe njedebe niile.
Nyocha igwe otu
Jiri igwe otu nnwale dị iche iche megharịa nnwale nke patches na-efu tupu ikesa ha na netwọkụ dị iche iche iji gbochie adịghị ike.
inyocha Patch Manager
Emebere ServiceOps Patch Manager ka ọ nyere ndị otu ụlọ ọrụ aka ijikwa, megharịa, na megharịa okirikiri ndụ njikwa Patch.
Hụ ka ụlọ ọrụ dị ka nke gị si eji njikwa akụrụngwa IT nweta nghọta na-arụ ọrụ
Kedu ụdị patching atọ ahụ?
A na-emepụta ihe nkedo n'ụzọ dị iche iche iji dozie nsogbu sistemu akọwapụtara ma ọ bụ iji kwalite ọrụ izugbe yana ịrụ ọrụ sistemu. Ihe nkpuchi nche, ndozi ahụhụ, na nkwalite atụmatụ bụ ụdị patches atọ a na-ahụkarị.
Ihe nkpuchi nchekwa bụ usoro bụ isi nke idozi adịghị ike nchekwa na ngwanrọ ebe ọ bụ na ha na-edozi oghere nchekwa ndị akọwapụtara na sistemụ.
Ihe nkedo na-edozi ahụhụ bụ ndị na-edozi ọdịda ngwa yana ahụhụ dị na sistemụ. Ha na-akwalite arụmọrụ arụmọrụ n'ozuzu ya site n'ibelata oge ejiri na-emeso ahụhụ.
Ngwunye nkwalite atụmatụ nwere ike ịgụnye nkwalite arụmọrụ bụ isi dị ka ịgbakọ ọsọ ọsọ ma ọ bụ mkpa akụrụngwa dị ala, ma ọ bụ ha nwere ike ịgụnye njirimara ndụ nke na-eme ka iji ngwa dị mfe na ngwa ngwa.
Kedu otu m ga-esi hụ na arụrụ arụrụala na sistemu m niile?
Iji hụ na echekwabara sistemụ gị niile ma na-akwado ụkpụrụ dịka GDPR, HIPAA na PCI mgbe niile, a ga-emelite sọftụwia na ngwa ndị ọzọ mgbe niile.
Akụrụngwa njikwa patch na-akpaghị aka nwere ike inyere gị aka na-ekwe nkwa na njedebe gị niile na-akwado ụdị ngwanrọ ọhụrụ mgbe niile yana mmelite ọ bụla na-efu efu na-ebunye ya ozugbo. Ọ nwekwara ike inyere gị aka ịmepụta usoro ntọala patch site n'ịhazi ọkwa ahụike nke sistemu ahụ dabere n'ịdị njọ nke patches na-efu.
Ị nwekwara ike hụ na ọhụhụhụhụhụhụhụhụhụhụhụhụhụnanarịn'ịgụọgụọgụọgụọgụọgụọgụzinananarịnarị ndị ọzọ dị na netwọkụ gị iji kwe nkwa nnabata patch.
Kedu ihe kpatara njikwa patch na Windows ji dị mkpa?
Ngwaahịa sọftụwia Microsoft na-agbanwe mgbe niile, yabụ nbudata na ịwụnye patches ngwanrọ nwere njirimara ọhụrụ nwere ike inyere gị aka imeziwanye ọrụ gị. Ọzọkwa, ngwanrọ na-ezighi ezi nwere ike ibute ọdịda ngwaọrụ, na-ebute mbelata arụmọrụ. Patch na-ebelata ohere nke mkpọka na oge ịdalata, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ gị n'akwụsịghị akwụsị.
Ngwunye na-efu efu na ngwa na sistemu arụ ọrụ bụ ihe na-ebutekarị mmebi nchekwa netwọkụ, mmebi sọftụwia, mfu data, na izu ohi njirimara, ihe niile enwere ike zere site na ibuga patches nwere mmelite nchekwa ozugbo ha dị. Enweghị nnabata nwere ike bute nnukwu ntaramahụhụ ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu na-amanye, yabụ ezigbo amụma njikwa patch nwere ike inyere gị aka iru ihe achọrọ.
Kedu ihe dị iche n'etiti patching na imelite ngwanrọ?
Mmelite ngwanrọ izugbe gụnyere ọtụtụ atụmatụ na arụrụ arụ na-emegide patches bụ mmelite na-edozi adịghị ike. Ọdịmma bụ nsogbu ma ọ bụ ntụpọ dị na nchekwa ngwanrọ ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ. Ọ bụrụ na sistemụ gị adịghị ike, ndị na-awakpo cyber nwere ike were koodu were mee ihe adịghị ike ndị a ọ gwụla ma echekwabara ha.
Imechi adịghị ike ozugbo enwere ike nwere ike ichebe gị pụọ na ndabi nchekwa. Akụrụngwa njikwa patch na-akpaghị aka nwere ike inyere gị aka n'ịme ngwa ngwa patch maka adịghị ike ma kwe nkwa na ewesara mmelite na ibuga na ngwaọrụ niile dị na netwọkụ gị.